အရငျက အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှထေကျ ခတျေသဈ အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ ပိုနုပြိုကွတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty အရငျက အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှထေကျ ခတျေသဈ အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ ပိုနုပြိုကွတာလဲ?
အရငျက အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှထေကျ ခတျေသဈ အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ ပိုနုပြိုကွတာလဲ?
အရင်ခေတ်တုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသက် ၃၀ထဲဝင်လာပြီဆိုရင် လူကြီးစာရင်းဝင်သွားပြီ။ အပျိုဟိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုကြပါတယ် ဒါပေမယ့် ယနေ့မှာ လူငယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မှတ်ပုံတင်ကိုင်ပြီး ကျွန်မ အသက် ၃၀ပါ လို့ပြောရင် ယုံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ယနေ့အသက် ၃၀အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၂၀အမျိုးသမီးတွေလို့ထင်ရအောင် နုပျိုနေပါတယ်။ အသက် ၃၀ကျော်လာရင် ပိုပိုပြီးတော့တောင် လှလာတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့ပါလဲ?
သိပ္ပံပညာရှင်များက middle age ဟာ ၃၅နှစ်မှ စတင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အသက် ၃၀ရှိနေပြီဆိုရင် တရားဝင်လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ယနေ့ဆောင်းပါးမှာ ယခင်က အသက် ၃၀အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ယနေ့ အသက်၃၀အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့ ဘာ့ကြောင့် ခြားနားသွားတာလဲ? ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လဲ? ဆိုတာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အသက်အရွယ် ခြားနားမှုကို နားလည်လာကြပါတယ်
ယခင်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၃၀ထဲဝင်လာပြီဆိုရင် ပျိုမြစ်မှုတွေကုန်ဆုံးပြီး အလှတရားတွေ မှေးမှိန်သွားပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ ငါ အသက် ၃၀ထဲရောက်လာပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ထောင်ကျလို့ ကလေးတွေရနေပြီ။ ငါခုထိ အပျိုကြီးဖြစ်နေတုန်းလို့ တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့လူနေမှုပုံစံတွေက ပြောင်းလဲလာခဲ့သလို ယခု အသက်၃၀အရွယ်ဟာ အရွယ်ကောင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်လာကြပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆို အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသက် ၃၀ကျော်လာရင် ငါအိုနေပြီ၊ အရွယ်လွန်နေပြီလို့ ထင်ကြပေမယ့် ယနေ့မှာတော့ ဒီကိန်းဂဏ္ဍန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်မတို့ မစိုးရိမ်ကြတော့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အသွင်အပြင်ပေါ်မှာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငယ်ရွယ်တယ်လို့ပဲ ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ပြီး လန်းဆန်းတတ်ကြွစွာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ စိတ်ပျိုလို့ ကိုယ်နုတဲ့ သဘောပါပဲ။
၂။ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ရှိလာပါတယ်
အရင်တုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ၂၅နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင် ငါ ဒါတွေဝတ်လိုက်ရင် အသက်ကြီးတဲ့ပုံပေါ်နေမလား? ဒါတွေက ကလေးကလားများ ဖြစ်နေမလားလို့ တွေးတာကြောင့် တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် အဝတ်အစားတွေ၊ ဂါဝန်၊ စကတ်အတိုတွေနဲ့ တခြားကလေးဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေဆို ရှောင်ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် အသက် ၃၀အရွယ် မိန်းကလေးတွေကတော့ အရောင်တောက်တောက် အဝတ်အစားတွေ၊ ဂျင်းအပြဲတွေ ဝတ်ဆင်နိုင်ပြီး ဆံပင်ကို ဘယ်အရောင်မဆို ဆိုးနိုင်တုန်းပါပဲ။ ကိုယ် ဝတ်ချင်တဲ့ အဝတ်အစားပုံစံ၊ ညှပ်ချင်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ မတွန့်ဆုတ်နေပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ယခုခေတ် အသက် ၃၀မိန်းကလေးတွေဟာ နုပျိုပြီး လန်းဆန်းတတ်ကြွနေပုံပေါ်တာပါ။
၃။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ မတူညီတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိပါတယ်
ကျွန်မတို့ အရွယ်ရောက်လာစဉ်က(ဒီဆောင်းပါးရေးသူက အသက် ၃၀ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်) ဗျူးတီးဘလော့ဂါတွေ ၊ highlighter တွေ၊ glittersတွေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အလှကုန်ပစ္စည်း ရွေးချယ်မှုက တကယ့်ကို အကန့်အသတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်နဲ့ ယနေ့အခြေအနေက သိသိသာသာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုလည်း ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိလာပါပြီ။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ သဘောထားတွေလည်း ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ အရင်တုန်းက အသက် ၃၀အမျိုးသမီးတွေဟာ ပွဲလမ်းသဘင် တွေရှိမှသာ မိတ်ကပ်ကို လိမ်းခြယ်ကြတာဖြစ်ပြီး ယနေ့ အမျိုးသမီးအများစုက ဘာအကြောင်းမှ မရှိတာတောင် နေ့တိုင်း မိတ်ကပ်လိမ်းကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတွေ တောက်ပပြီး ဆွဲဆောင်မှု ဘာ့ကြောင့် ပိုရှိသလဲဆိုတာ ဒါ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေ ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်
ခေတ်သစ် အသက် ၃၀အမျိုးသမီးတွေက skin care နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်း အများကြီးသိလာပါပြီ။ ကိုယ်ဘယ်မိတ်ကပ်ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?၊ အသားအရေကောင်းအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာ အွန်လိုင်းကနေတဆင့် သိလာသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ အသိအမြင်တွေ ပွင့်လာတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေကလည်း တည်ငြိမ်ပြီးသားဆိုတော့ ကိုယ်လိုချင်တာကို စတိုးဆိုင်မှာ သွားရွေးချယ်ယုံပါပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ gyms တွေလည်း ရှိလာပါပြီ။ Confidence ရှိလာတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပိုက်ဆံသုံးဖို့ တွန့်ဆုတ် မနေတော့ပါဘူး။ ရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ယခင် generation(မျိုးဆက်) မှာမရှိတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို စောင့်ရှောက်မှုကောင်းတွေယူပြီး အားကစားတွေ လုပ်တဲ့အလေ့အထ ရှိလာပါတယ်။
၅။ အဆင့်မြင့် cosmetology လုပ်ငန်းတွေကို သုံးလာပါတယ်
အရင်ခေတ်တုန်းက ကျွန်မတို့မိခင်တွေဟာ မိတ်ကပ်၊ ပေါင်ဒါ၊ နှုတ်ခမ်းနီလောက်သာ သိခဲ့ကြပြီး မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘယ်လိုလိမ်းချယ်ရတယ်၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာ သိဖို့မလွယ်ခဲ့သလို၊ အလွယ်တကူလည်း မလုပ်တတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်နည်းအဆင့်ဆင့်က ကလေးကအစ ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို လုပ်တတ်နေပါပြီ။ နေရာတိုင်းမှာ (အလှအပဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ) Cosmetologists တွေလည်းအများကြီးရှိပြီး ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် ဈေးနှုန်းကလည်း မြင့်မားမှု မရှိပါဘူး။ ပလတ်စတစ် ဆာဂျရီကိုသာ ရည်ညွန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါင်းတင်တာ ၊နှိပ်နယ်တာကစလို့ ခေါင်းအစခြေအဆုံး ကိုယ့်ရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိလာပါပြီ။
၇။ ကိုယ့်ရဲ့စတိုင်ကို ရှာတွေ့လာကြပါတယ်
ယနေ့ခေတ် ဈေးဝယ်ထွက်ရတာက သက်သက်သာသာနဲ့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဝယ်ဝယ်မဝယ်ဝယ် မျက်စိအရသာခံပြီး ဆိုင်တွေ ပတ်ကြည့်တတ်တဲ့ ၊ အချိန်ကုန်ခံပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ရတာ နှစ်သက်တဲ့ ကျွန်မတို့အတွက် shopping mall အကြီးကြီးတွေ ရှိလာပါပြီ။ ဒီလိုလျှောက်ဝယ်ရတာ မနှစ်သက်သူတွေအတွက် အိမ်အရောက်ပို့ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ အွန်လိုင်းစတိုးတွေ ရှိလာပါပြီ။ မော်ဒယ်မှာ သို့မဟုတ် ပုံမှာပြထားတဲ့ မူရင်းအဝတ်အစားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စတိုင် လိုက်မလိုက်ဆိုတာ ကျွန်မတို့အတွက် စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက ဘယ်စတိုင်လေးနဲ့ဆို လိုက်မလဲ? ဘယ်အင်္ကျီဆိုရင် ဘယ်စကတ်လေးနဲ့ လိုက်မလဲ? ဘယ် accessories နဲ့ လိုက်မလဲဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်လာနိုင်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀လောက်က ဒီလိုရွေးချယ်ဖို့ အဝတ်အစားတွေ အများကြီးမရှိခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ကူးကြည့်တာတောင် ခဲယဉ်းပါတယ်။
၈။ ယုံကြည်စိတ်ချမှု နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်မှု ရှိလာပါတယ်
ခေတ်သစ်လူနေမှုပုံစံက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အပေါ် ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာပါတယ်။ အရင် generation တုန်းက မိသားစုတစ်စု ရှိခြင်းဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းသာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အချိန်မှာ အိမ်မှာပဲနေ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန် ကလေးထိန်းပြီး ဘဝကို မြှုပ်နှံလိုက်ကြပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးအနည်းငယ်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အမျိုးသမီးတွေအတွက် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခဲ့ကြပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ အသက် ၃၀ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပညာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျာင်းက အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ပိုပြီး ရောက်ရှိဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကလည်း သူတို့ကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။
၉။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုမို responsible ရှိလာပါတယ်
အရင်တုန်းက ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတတွေ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ၊ ဆရာဝန်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့သလို ဆရာဝန်ပြဖို့တောင် ရက်ချိန်းအခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ယနေ့မှာ စာအုပ်၊ စာပေတွေဖတ်ပြီး ဗဟုသုတတွေရရှိတာကြောင့် အလှအပပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ် နှံ့စပ်စွာ သိရှိလာကြပါပြီ။ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိရင် ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်သလဲ? ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြဖို့လိုသလားဆိုတာ အွန်လိုင်းမှာ ရှာဖွေယုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ရောဂါကို အချိန်မှီသိရှိ ကုသမှုခံယူလို့ ရပါပြီ။ ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နေ့မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြဖို့ လွယ်ကူလာပြီး အရည်အသွေးမြင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေလည်း အများကြီးရှိလာပါပြီ။
၁၀။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုရှိလာပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်နိုင်လာပါတယ်
အရင်တုန်းက လူ့အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသမီးတွေကို တခြားလူတွေရဲ့ အမြင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူ ပြောတာကို နားထောင်ဖို့၊ လေးစားဖို့(respect) ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုတခုခုပြောရင် ရှက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ self-confidence လည်းကင်းမဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာ ဒီsocial လူနေမှုပုံစံများက ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ အသက်ကြီးသူတိုင်းက အရာရာကို တတ်သိတဲ့သူ၊ ကိုယ့်ထက် သေချာပေါက်တော်တဲ့သူ မဟုတ်တာကို ကျွန်မတို့ သိလာကြပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့်ျွန်မတို့က သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီးမှ ယူရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း လေးစားမှုရှိရပါမယ်။
၁၀။ ရေအလုံအလောက် သောက်တာက ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိလာပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာက ကျွန်မတို့ဟာ သန့်စင်တဲ့ရေကို သောက်တာက ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာ မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ကျွန်မတို့ လက်ဖက်ရည်ကိုသာ သောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခု အရွယ်ရောက်သူအမျိုးသမီးတိုင်းက ကလေးဘဝမှာ ရေသောက်တဲ့အလေ့အထ မရှိရင် အသက်ကြီးလာမှ ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သိလာပါပြီ။ ကျွန်မဆိုရင် ငယ်ငယ်ထဲက ရေသောက်တတ်တဲ့ အကျင့်မရှိတာကြောင့် အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာ အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး စိုစိုပြေပြေမရှိတာ၊ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်တာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အသက် ၃၀မှာ အသားအရေကို ရေဓါတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုံလောက်တဲ့အရည်တွေ ရရှိစေတာကြောင့် ရေအလုံအလောက်သောက်တာက တကယ့်ကို အရေးကြီးပါတယ်။
Bonus။ ယခင်က အသက် ၃၀ အမျိုးသမီးနဲ့ ယခုအသက် ၃၀ အမျိုးသမီး ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ?
ယခင်က အသက် ၃၀ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာ သိချင်ရင် လက်ဝဲဘက်ပုံက Irina Muravyova (၁၉၇၀ခုနှစ်)ကိုကြည့်ပါ။ မင်းသမီးဟာ Moscow Does Not Believe in Tears ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း 1979ခုနှစ်မှာ အသက် ၃၀ ရှိပါပြီ။ ညာဘက်ပုံထဲက မင်းသမီးကတော့ 1988 မှာမွေးဖွားပြီး ယခုအသက် 30ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Emma Stone ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်တိုင်းမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ IDပေါ်က ကိန်းကဏ္ဍန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မစိုးရိမ်သင့်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိအသက်အရွယ်မှာ ဘာအားသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ? အောက်မှာ မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးနိုင်ပါတယ်။
အရငျက အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှထေကျ ခတျေသဈ အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှကေ ဘာ့ကွောငျ့ ပိုနုပြိုရတာလဲ?
အရငျခတျေတုနျးက အမြိုးသမီးတဈယောကျ အသကျ ၃၀ထဲဝငျလာပွီဆိုရငျ လူကွီးစာရငျးဝငျသှားပွီ။ အပြိုဟိုငျးကွီးဖွဈသှားပွီလို့ ဆိုကွပါတယျ ဒါပမေယျ့ ယနမှေ့ာ လူငယျမိနျးကလေးတဈယောကျက မှတျပုံတငျကိုငျပွီး ကြှနျမ အသကျ ၃၀ပါ လို့ပွောရငျ ယုံနိုငျစရာမရှိပါဘူး။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ ယနအေ့သကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှဟော အသကျ ၂၀အမြိုးသမီးတှလေို့ထငျရအောငျ နုပြိုနပေါတယျ။ အသကျ ၃၀ကြျောလာရငျ ပိုပိုပွီးတော့တောငျ လှလာတာကို တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ဒါကဘာဖွဈလို့ပါလဲ?
သိပ်ပံပညာရှငျမြားက middle age ဟာ ၃၅နှဈမှ စတငျကွောငျး သကျသပွေခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အသကျ ၃၀ရှိနပွေီဆိုရငျ တရားဝငျလူငယျတဈဦး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ယနဆေ့ောငျးပါးမှာ ယခငျက အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ ယနေ့ အသကျ၃၀အမြိုးသမီးတဈယောကျတို့ ဘာ့ကွောငျ့ ခွားနားသှားတာလဲ? ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှကွေောငျ့လဲ? ဆိုတာမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
၁။ အသကျအရှယျ ခွားနားမှုကို နားလညျလာကွပါတယျ
ယခငျက အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ အသကျ ၃၀ထဲဝငျလာပွီဆိုရငျ ပြိုမွဈမှုတှကေုနျဆုံးပွီး အလှတရားတှေ မှေးမှိနျသှားပွီလို့ ပွောကွပါတယျ။ ငါ အသကျ ၃၀ထဲရောကျလာပွီ။ သူငယျခငျြးတှေ အိမျထောငျကလြို့ ကလေးတှရေနပွေီ။ ငါခုထိ အပြိုကွီးဖွဈနတေုနျးလို့ တှေးကောငျးတှေးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယနလေူ့နမှေုပုံစံတှကေ ပွောငျးလဲလာခဲ့သလို ယခု အသကျ၃၀အရှယျဟာ အရှယျကောငျးဖွဈကွောငျး နားလညျလာကွပါတယျ။ အရငျတုနျးကဆို အမြိုးသမီးတဈယောကျ အသကျ ၃၀ကြျောလာရငျ ငါအိုနပွေီ၊ အရှယျလှနျနပွေီလို့ ထငျကွပမေယျ့ ယနမှေ့ာတော့ ဒီကိနျးဂဏ်ဍနျးတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ကြှနျမတို့ မစိုးရိမျကွတော့ပါဘူး။ ကြှနျမတို့ဟာ ကိုယျ့ရဲ့ အသှငျအပွငျပျေါမှာ အပွုသဘောဆောငျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ငယျရှယျတယျလို့ပဲ ခံစားရပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ကွညျ့ကောငျးအောငျပွငျဆငျပွီး လနျးဆနျးတတျကွှစှာ နထေိုငျကွပါတယျ။ စိတျပြိုလို့ ကိုယျနုတဲ့ သဘောပါပဲ။
၂။ လှတျလပျစှာ ရှေးခယျြခှငျ့တှေ ရှိလာပါတယျ
အရငျတုနျးက အမြိုးသမီးတဈယောကျ ၂၅နှဈအရှယျရောကျလာပွီဆိုရငျ ငါ ဒါတှဝေတျလိုကျရငျ အသကျကွီးတဲ့ပုံပျေါနမေလား? ဒါတှကေ ကလေးကလားမြား ဖွဈနမေလားလို့ တှေးတာကွောငျ့ တောကျတောကျပွောငျပွောငျ အဝတျအစားတှေ၊ ဂါဝနျ၊ စကတျအတိုတှနေဲ့ တခွားကလေးဆနျတဲ့အဝတျအစားတှဆေို ရှောငျကွပါတယျ။ ယနခေ့တျေ အသကျ ၃၀အရှယျ မိနျးကလေးတှကေတော့ အရောငျတောကျတောကျ အဝတျအစားတှေ၊ ဂငျြးအပွဲတှေ ဝတျဆငျနိုငျပွီး ဆံပငျကို ဘယျအရောငျမဆို ဆိုးနိုငျတုနျးပါပဲ။ ကိုယျ ဝတျခငျြတဲ့ အဝတျအစားပုံစံ၊ ညှပျခငျြတဲ့ ဆံပငျပုံစံ၊ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အရာတှကေို ရှေးခယျြဖို့ မတှနျ့ဆုတျနပေါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့လဲ ယခုခတျေ အသကျ ၃၀မိနျးကလေးတှဟော နုပြိုပွီး လနျးဆနျးတတျကွှနပေုံပျေါတာပါ။
၃။ အလှကုနျပစ်စညျးတှအေပျေါမှာ မတူညီတဲ့ သဘောထားတှေ ရှိပါတယျ
ကြှနျမတို့ အရှယျရောကျလာစဉျက(ဒီဆောငျးပါးရေးသူက အသကျ ၃၀ရှိပွီဖွဈပါတယျ) ဗြူးတီးဘလော့ဂါတှေ ၊ highlighter တှေ၊ glittersတှလေညျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ အလှကုနျပစ်စညျး ရှေးခယျြမှုက တကယျ့ကို အကနျ့အသတျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၅နှဈနဲ့ ယနအေ့ခွအေနကေ သိသိသာသာ ပွောငျးလဲခဲ့ပွီး အလှကုနျပစ်စညျးဆိုလညျး ရှေးခယျြစရာတှေ အမြားကွီးရှိလာပါပွီ။ မိတျကပျလိမျးတဲ့ သဘောထားတှလေညျး ပွောငျးလဲခဲ့ပါပွီ။ အရငျတုနျးက အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှဟော ပှဲလမျးသဘငျ တှရှေိမှသာ မိတျကပျကို လိမျးခွယျကွတာဖွဈပွီး ယနေ့ အမြိုးသမီးအမြားစုက ဘာအကွောငျးမှ မရှိတာတောငျ နတေို့ငျး မိတျကပျလိမျးကွပါတယျ။ ခတျေသဈအမြိုးသမီးတှေ တောကျပပွီး ဆှဲဆောငျမှု ဘာ့ကွောငျ့ ပိုရှိသလဲဆိုတာ ဒါ့ကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
၄။ ငှရေေးကွေးရေး အခွအေနေ ပိုပွီးတညျငွိမျလာတာကွောငျ့လညျး ဖွဈပါတယျ
ခတျေသဈ အသကျ ၃၀အမြိုးသမီးတှကေ skin care နှငျ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှအေကွောငျး အမြားကွီးသိလာပါပွီ။ ကိုယျဘယျမိတျကပျကို ရှေးခယျြသငျ့သလဲ?၊ အသားအရကေောငျးအောငျ ဘယျလိုထိနျးသိမျးမလဲဆိုတာ အှနျလိုငျးကနတေဆငျ့ သိလာသလို ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျလိုဂရုစိုကျရမလဲဆိုတဲ့ အသိအမွငျတှေ ပှငျ့လာတာကွောငျ့လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီအသကျအရှယျမှာ ကိုယျပိုငျဝငျငှကေလညျး တညျငွိမျပွီးသားဆိုတော့ ကိုယျလိုခငျြတာကို စတိုးဆိုငျမှာ သှားရှေးခယျြယုံပါပဲ။ နရောတိုငျးမှာ gyms တှလေညျး ရှိလာပါပွီ။ Confidence ရှိလာတဲ့အတှကျ ကိုယျ့အတှကျကိုယျ ပိုကျဆံသုံးဖို့ တှနျ့ဆုတျ မနတေော့ပါဘူး။ ရလဒျတဈခုအနနေဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော ယခငျ generation(မြိုးဆကျ) မှာမရှိတဲ့ ငှကွေေးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အသှငျအပွငျကို စောငျ့ရှောကျမှုကောငျးတှယေူပွီး အားကစားတှေ လုပျတဲ့အလအေ့ထ ရှိလာပါတယျ။
၅။ အဆငျ့မွငျ့ cosmetology လုပျငနျးတှကေို သုံးလာပါတယျ
အရငျခတျေတုနျးက ကြှနျမတို့မိခငျတှဟော မိတျကပျ၊ ပေါငျဒါ၊ နှုတျခမျးနီလောကျသာ သိခဲ့ကွပွီး မိတျကပျပစ်စညျးတှနေဲ့ ပတျသတျလို့ ဘယျလိုလိမျးခယျြရတယျ၊ ဘယျလိုပွငျဆငျရတယျဆိုတာ သိဖို့မလှယျခဲ့သလို၊ အလှယျတကူလညျး မလုပျတတျခဲ့ကွပါဘူး။ ယနခေ့တျေမှာတော့ မိတျကပျလိမျးခွယျနညျးအဆငျ့ဆငျ့က ကလေးကအစ ဘယျအသကျအရှယျမဆို လုပျတတျနပေါပွီ။ နရောတိုငျးမှာ (အလှအပဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူတှေ) Cosmetologists တှလေညျးအမြားကွီးရှိပွီး ဒီဝနျဆောငျမှုတှအေတှကျ ဈေးနှုနျးကလညျး မွငျ့မားမှု မရှိပါဘူး။ ပလတျစတဈ ဆာဂရြီကိုသာ ရညျညှနျးတာ မဟုတျပါဘူး။ ပေါငျးတငျတာ ၊နှိပျနယျတာကစလို့ ခေါငျးအစခွအေဆုံး ကိုယျ့ရဲ့အသှငျအပွငျနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ဂရုစိုကျဖို့ တခွားနညျးလမျးတှေ ရှိလာပါပွီ။
၇။ ကိုယျ့ရဲ့စတိုငျကို ရှာတှလေ့ာကွပါတယျ
ယနခေ့တျေ ဈေးဝယျထှကျရတာက သကျသကျသာသာနဲ့ ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ ဝယျဝယျမဝယျဝယျ မကျြစိအရသာခံပွီး ဆိုငျတှေ ပတျကွညျ့တတျတဲ့ ၊ အခြိနျကုနျခံပွီး ဈေးဝယျထှကျရတာ နှဈသကျတဲ့ ကြှနျမတို့အတှကျ shopping mall အကွီးကွီးတှေ ရှိလာပါပွီ။ ဒီလိုလြှောကျဝယျရတာ မနှဈသကျသူတှအေတှကျ အိမျအရောကျပို့ပေးတဲ့ ဝနျဆောငျမှုနှငျ့အတူ အှနျလိုငျးစတိုးတှေ ရှိလာပါပွီ။ မျောဒယျမှာ သို့မဟုတျ ပုံမှာပွထားတဲ့ မူရငျးအဝတျအစားနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့စတိုငျ လိုကျမလိုကျဆိုတာ ကြှနျမတို့အတှကျ စမျးသပျမှုတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားက ဘယျစတိုငျလေးနဲ့ဆို လိုကျမလဲ? ဘယျအင်ျကြီဆိုရငျ ဘယျစကတျလေးနဲ့ လိုကျမလဲ? ဘယျ accessories နဲ့ လိုကျမလဲဆိုတာ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ ရှေးခယျြလာနိုငျပါပွီ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ ၄၀လောကျက ဒီလိုရှေးခယျြဖို့ အဝတျအစားတှေ အမြားကွီးမရှိခဲ့ပါဘူး။ စိတျကူးကွညျ့တာတောငျ ခဲယဉျးပါတယျ။
၈။ ယုံကွညျစိတျခမြှု နဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နတေတျမှု ရှိလာပါတယျ
ခတျေသဈလူနမှေုပုံစံက အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ဘဝရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျအပျေါ ကွီးမားတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိလာပါတယျ။ အရငျ generation တုနျးက မိသားစုတဈစု ရှိခွငျးဆိုတဲ့ ရညျမှနျးခကျြတဈခုတညျးသာ တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှဟော အိမျထောငျကပြွီးတဲ့အခြိနျမှာ အိမျမှာပဲနေ၊ အိမျမှုကိစ်စတှနေဲ့ အခြိနျကုနျ ကလေးထိနျးပွီး ဘဝကို မွှုပျနှံလိုကျကွပါတယျ။ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးတဈခုခုလုပျမယျဆိုတာ အမြိုးသမီးအနညျးငယျရဲ့ စိတျကူးယဉျအိမျမကျသာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အရငျတုနျးက အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အခှငျ့အလမျး နညျးပါးခဲ့ကွပါတယျ။ ယနမှေ့ာတော့ အသကျ ၃၀ အမြိုးသမီးတှဟော ပညာရေး၊ အသကျမှေးဝမျးကြာငျးက အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေါပွီ။ သူတို့ဘဝမှာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှေ ပိုပွီး ရောကျရှိဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။ သူတို့ရဲ့ မိမိကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုကလညျး သူတို့ကို ပိုပွီး ဆှဲဆောငျမှု ရှိစပေါတယျ။
၉။ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသတျပွီး ပိုမို responsible ရှိလာပါတယျ
အရငျတုနျးက ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသတျပွီး ဗဟုသုတတှေ၊ ဆေးရုံဆေးခနျးတှေ၊ ဆရာဝနျတှနေဲ့ အလှမျးဝေးခဲ့သလို ဆရာဝနျပွဖို့တောငျ ရကျခြိနျးအခကျအခဲတှေ ရှိခဲ့ကွပါတယျ။
ယနမှေ့ာ စာအုပျ၊ စာပတှေဖေတျပွီး ဗဟုသုတတှရေရှိတာကွောငျ့ အလှအပပဲဖွဈဖွဈ၊ ကနျြးမာရေးပဲဖွဈဖွဈ နှံ့စပျစှာ သိရှိလာကွပါပွီ။ ဘယျလိုလက်ခဏာတှရှေိရငျ ဘာရောဂါဖွဈနိုငျသလဲ? ဆရာဝနျနဲ့ သှားပွဖို့လိုသလားဆိုတာ အှနျလိုငျးမှာ ရှာဖှယေုံနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ရောဂါကို အခြိနျမှီသိရှိ ကုသမှုခံယူလို့ ရပါပွီ။ ကိုယျအဆငျပွတေဲ့နမှေ့ာ ဆရာဝနျနဲ့ သှားပွဖို့ လှယျကူလာပွီး အရညျအသှေးမွငျ့ ပုဂ်ဂလိက ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးတှလေညျး အမြားကွီးရှိလာပါပွီ။
၁၀။ ကိုယျ့ကိုယျကို လေးစားမှုရှိလာပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ရပျတညျနိုငျလာပါတယျ
အရငျတုနျးက လူ့အဖှဲ့အစညျးက အမြိုးသမီးတှကေို တခွားလူတှရေဲ့ အမွငျတှေ၊ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ထကျအသကျကွီးတဲ့သူ ပွောတာကို နားထောငျဖို့၊ လေးစားဖို့(respect) ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ ကိုယျ့ထကျအသကျကွီးတဲ့ သူတဈယောကျယောကျက ကိုယျ့ကိုတခုခုပွောရငျ ရှကျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ self-confidence လညျးကငျးမဲ့ပါတယျ။ ယနမှေ့ာ ဒီsocial လူနမှေုပုံစံမြားက ပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါပွီ။ အသကျကွီးသူတိုငျးက အရာရာကို တတျသိတဲ့သူ၊ ကိုယျ့ထကျ သခြောပေါကျတျောတဲ့သူ မဟုတျတာကို ကြှနျမတို့ သိလာကွပါပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ြှနျမတို့က သူတို့ရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြတှကေို ဆနျးစဈဝဖေနျပွီးမှ ယူရပါမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုလညျး လေးစားမှုရှိရပါမယျ။
၁၀။ ရအေလုံအလောကျ သောကျတာက ဘယျလောကျအရေးကွီးတယျဆိုတာ သိလာပါတယျ
လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈမြားစှာက ကြှနျမတို့ဟာ သနျ့စငျတဲ့ရကေို သောကျတာက ဘယျလောကျအရေးကွီးလဲဆိုတာ မသိခဲ့ကွပါဘူး။ ကြှနျမတို့ လကျဖကျရညျကိုသာ သောကျခဲ့ကွပါတယျ။ ယခု အရှယျရောကျသူအမြိုးသမီးတိုငျးက ကလေးဘဝမှာ ရသေောကျတဲ့အလအေ့ထ မရှိရငျ အသကျကွီးလာမှ ရယူပိုငျဆိုငျဖို့ အရမျးခကျခဲတယျဆိုတာ သိလာပါပွီ။ ကြှနျမဆိုရငျ ငယျငယျထဲက ရသေောကျတတျတဲ့ အကငျြ့မရှိတာကွောငျ့ အသကျအရှယျရလာတဲ့အခြိနျမှာ အသားအရခွေောကျသှပွေီ့း စိုစိုပွပွေမေရှိတာ၊ အရေးအကွောငျးတှပေျေါတာ ဖွဈလာပါတယျ။ အသကျ ၃၀မှာ အသားအရကေို ရဓေါတျပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လုံလောကျတဲ့အရညျတှေ ရရှိစတောကွောငျ့ ရအေလုံအလောကျသောကျတာက တကယျ့ကို အရေးကွီးပါတယျ။
Bonus။ ယခငျက အသကျ ၃၀ အမြိုးသမီးနဲ့ ယခုအသကျ ၃၀ အမြိုးသမီး ဘယျလိုကှာခွားသလဲ?
ယခငျက အသကျ ၃၀ အမြိုးသမီးတဈယောကျက ဘယျလိုပုံလဲဆိုတာ သိခငျြရငျ လကျဝဲဘကျပုံက Irina Muravyova (၁၉၇၀ခုနှဈ)ကိုကွညျ့ပါ။ မငျးသမီးဟာ Moscow Does Not Believe in Tears ရုပျရှငျ ရိုကျကူးနစေဉျအတှငျး 1979ခုနှဈမှာ အသကျ ၃၀ ရှိပါပွီ။ ညာဘကျပုံထဲက မငျးသမီးကတော့ 1988 မှာမှေးဖှားပွီး ယထုအသကျ 30ရှိပွီဖွဈတဲ့ Emma Stone ဖွဈပါတယျ။
အသကျအရှယျတိုငျးမှာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျအားသာခကျြတှရှေိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ IDပျေါက ကိနျးကဏ်ဍနျးတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး မစိုးရိမျသငျ့ပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ လကျရှိအသကျအရှယျမှာ ဘာအားသာခကျြတှေ ရှိပါသလဲ? အောကျမှာ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးနိုငျပါတယျ။
Previous articleအမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် လက်ထပ်လိုစိတ် ပိုပြင်းပြရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း
Next articleရွှေအိုရောင်အဆင်းနဲ့ ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံသားပိုင်ရှင်လေးရဲ့ ဆံပင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံပြုချက်